Amaholide eKenya Safari, Safaris eKenya, Kenya Budget Safaris, Kenya Safari, Budget Holiday Safaris
I-Kenya Tours, Kenya Safari, Kenya Safaris, uhambo lwaseTanzania
IMount Kenya Climbing Safaris
Kenya - ITanzania Safaris
ITanzania Lodge Safaris
I-Tanzania Camping Safaris
IMt Kilimanjaro Climbing Safaris
Best of isabelomali amatende & okunethezeka indawo yokuhlala Kenya & Tanzania.Sondelana nemiphefumulo yehlane lase-Afrika futhi uthole imvelo yemvelo ngokusemandleni.
SIYAKWAMUKELA UKUZE SIFUNDISE IHOLIDAY SAFARIS
Hambani nezazi ezazi i-Afrika.
IBudget Holiday Safaris iyi-tour opharetha eKenya naseTanzania, ihlinzeka ngohlu oluphelele lwezinsizakalo zokuvakasha kwabantu kubantu namaqembu emazweni ahlukene. I-Budget Holiday Safaris isebenza ngabantu abaqeqeshiwe kakhulu, abanolwazi lweminyaka engaphezu kweyishumi embonini yezokuvakasha. Le nkampani isebenza nabalingani abahlukahlukene abahamba phambili eMkhakheni wezoHambo neziBhedlela eKenya naseTanzania ukuhlinzeka ngezinsizakalo ezinhle kakhulu kumakhasimende. Sinezinsizakalo ezahlukahlukene ezingenziwa zenzelwe izidingo zethu zomuntu siqu futhi nabasebenzi bethu abakhethekile basebenza ndawonye ukuhlinzeka ngezinsizakalo ezinhle kakhulu kumakhasimende ethu ahlukahlukene. Akhiwe eNairobi City Center, amahhovisi ethu avulwa zonke izinsuku kusuka ngo-7:00 AM, izinsuku eziyi-7 ngeviki, anikela ngezinsizakalo zokuxhasa nezicelo eziphuthumayo, ngo-24/7
3 IZINSUKU KENYA TOUR: MASAI MARA PackAGE
Indawo yokuhambela uNdunankulu yaseKenya, indawo ekugcinwa kuyo imidlalo yaseMasai Mara, iyindawo edume umhlaba wonke ngenxa yokufuduka kwasolwandle okwenzeka minyaka yonke, okwaziwa ngokuthi yiGreat Migration, ebhalwe isimanga sesishiyagalombili somhlaba.
IZINSUKU ezi-5 MT KENYA CLIMB- SIRIMON-SIRIMON ROUTE
Khuphuka ungene ehlathini uye ngendlela ebanzi eya endaweni engqungquthela. Indlela iqala ohlangothini olusenyakatho ntshonalanga yentaba eduze kwaseNanyuki. Ukufinyelela kwanele futhi izakhiwo zasendlini ezinamakamelo zihamba phambili kulolu hlangothi lwentaba.
I-6 ILANGA KENYA SAFARI: MASAI MARA - LAKE NAKURU - AMBOSELI
ILake Nakuru bekulokhu kubhekwa njengokuhle kakhulu njenge-flamingo echi par. Umehluko kanye nokuhanjiswa okusobala phakathi kwechibi le-soda elingashoni nezinyoni zalo ezihamba phambili kanye namahlathi opopayi.
6 IZINSUKU ZAMABILI KILIMANJARO TREKKING: MACHAME ROUTE
Lokhu mhlawumbe kuyindlela enhle kunazo zonke ekhuphukela eKilimanjaro. Yonke imishini yakho nezinto zakho zitholakala futhi umpheki ulungisa konke ukudla kwakho, Lapho indawo yokuhlala eMarangu isezindlini.
IZINSUKU eziyi-8 ZOKUPHAKATHI HOLIDAY SAFARI - MASAI MARA
Ubusuku obu-3 eMasai Mara Game Reserve- Kenya, lapho uzothola khona ama-drive ngaphezulu komdlalo owodwa. Ubusuku obu-1 eLake Nakuru lapho uthola khona ukubona ama-flamesos, obhejane abamhlophe nabamnyama nokunye okuningi.
IZINSUKU eziyi-10 KENYA KANYE NEBHODI YOKUFUNDA KWENKOLO YOKU-TANZANIA: MASAI MARA
Izinsuku eziyi-10 iKenya neTanzania izilwane zasendle zokuhamba ziyindlela yokuhamba ngamatende ekunika isipiliyoni sangempela sendawo yokuhamba. Simboza iMasai Mara, iLake Nakuru, iSerengeti, iNgorongoro Crater neChibi laseMaraara.
Budget Holiday Safaris imikhiqizo ifaka iqoqo eliphelele le-safaris phakathi Kenya futhi Tanzania futhi Uganda. I-Lodge Safaris I-Luxury ne-standard wastani Budget Camping Safaris, Amakamu Okunethezeka Amaphakade Amatende iSafaris, Ukunyuka Kwezintaba Kenya, Ukuhamba iSafaris Ukuvakasha okukhethekile emazweni axhashazwa kakhulu, izinkambo kanye nokuvakasha kwezinhlanga kanye namaholide olwandle.
Kokubili ukuhamba okujwayelekile neTailor eyenziwe yenziwa safaris kuyabiza ngokuncintisana futhi kwenzelwe ukufanela isabelomali sakho. Budget Holiday Safaris ihlinzeka ngokudluliselwa kwesikhumulo sezindiza sangasese phakathi kwesikhumulo sezindiza i-Kilimanjaro kanye ne-Arusha. Sinezinsizakalo eziphansi, ezibandakanya ukubhukwa kwamahhotela nokudluliselwa kwezindiza kumahhotela asedolobheni kanye namahhotela angaphandle kwedolobha.
IBudget Holiday Safaris iyi-tour opharetha eKenya naseTanzania, ihlinzeka ngohlu oluphelele lwezinsizakalo zokuvakasha kwabantu kubantu namaqembu emazweni ahlukene.
Amahhotela nama-Safari Lodges
Inkonzo yethu yamakhasimende kanye nohambo
umhlahlandlela ulungele ukusiza.
IStEllis House, Street Wabera
© 2019. Wonke Amalungelo Agodliwe. Budget Holiday Safaris
Idizayini yeWebhu ka Webscreationsdesign.com